Landela i-WWDC 2017 Keynote bukhoma kunye ndivela eMac | Ndisuka mac
Landela i-WWDC 2017 Keynote bukhoma kunye ndivela eMac
Kunyaka omnye u-Apple uza kuqala iWWDC kubaphuhlisi kwaye kule meko ukongeza kumnyhadala ngokwawo, inkampani izakulinywa okokuqala kulo nyaka ka-2017 phambi kwabasebenzisi bayo ngenqaku lokuqala elisemthethweni lika-2017. Ku-Epreli odlulileyo u-Apple wazisa ezinye Iindaba zehardware kwiwebhusayithi yazo ngaphandle kokwenza intetho ephambili exhaphake kwinyanga yoKwindla, kodwa ngeli xesha khange benze ntetho kwaye ngoku le WWDC ithatha umdla ongaphezulu kunalo lonke uhlelo umboniso wee-iPads ezintsha, iiMacs ezihlaziyiweyo kunye nayo yonke isoftware yezixhobo zabo, ii-macOS, i-iOS, i-tvOS kunye ne-watchOS.
Ngokucacileyo, njengoko sisenza ngomboniso ngamnye we-Apple, siya kuba nesixhobo esiphilayo esisebenzayo, apho ukongeza ekuboneni iindaba ngalo mzuzu Nika izimvo, wabelane kwaye uphawule ngale nto siyibonayo ngexesha lokwenyani Enkosi ngokuncokola Ke unokumakisha olu suku ngombala obomvu kwaye ulandele igama eliphambili apha kunye neqela endiliMac.
Live Blog WWDC 2017
Ungongeza idilesi yemeyile yakho apha ukuze sikwazise ekuqaleni kosasazo, ngokuqinisekileyo oluya kuba lincinci ngaphambi kokuba intetho ephambili ka-Apple iqale, malunga ne-18: 45 emva kwemini ngoJuni 5 sizobe sihamba. Iqela liphela likaSoy de Mac, iActualidad iPhone kunye neActualidad Gadget liza kusebenza nzima ukwabelana nani nonke ngeendaba zesoftware kunye nezixhobo ezinokubakho ezisibonisayo ukusuka kwinqanaba leMcEnergy Convention Centre, eSan José, California.
Awungekhe uphulukane noku!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Landela i-WWDC 2017 Keynote bukhoma kunye ndivela eMac
Le yindlela uSteve Jobs angcwaba ngayo iMac OS 9 eWWDC ngo-2002
UDuncan Sinfield, usibonisa ividiyo yesibini kaJuni evela eApple Park